E-mail အသုံးပြုကြတဲ့ Organization တွေအနေနဲ့ အရင်ကတည်းက Email System မျိုးစုံအသုံးပြုကြတယ်။ ဥပမာ- Infrastructure မှာ Exchange Server တွေ ထားပြီး Email အတွက် Mailboxes တွေ သုံးကြတယ်။ တချို့တွေက အခြား Cloud Based Mail တွေ Web Hosting Mail တွေ သုံးကြပါတယ်။ အခုအခါမှာ Microsoft ရဲ့ Office 365 (O365) တို့ Microsoft365 (M365) တို့ဆီ ရွှေ့ပြောင်း Migrate လုပ်ပြီး သုံးလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
🔹💭 ဘာကြောင့် ပြောင်းသုံးလာကြသလဲ ?
🔹💭 ဘယ်လို အကျိုးတွေရှိလို့လဲ ?
🔹💭 ကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ?
… အစရှိသည်တို့ကို ဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါမယ် ~~~
ကမ္ဘာနဲ့အဝန်း Use Case တွေ မပြောသေးခင်မှာ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Use Case တွေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Bank။ Organization၊ Hospital တွေ ရဲ့ Email System တွေကို Microsoft ရဲ့ Cloud Solution ဖြစ်တဲ့ O365/M365 Solution တွေဆီ အလျင်အမြန်ရွှေ့ပြောင်းသုံးစွဲလာကြပါတယ်။
🔹💭 အရင် အသုံးပြုနေကြ Stable ဖြစ်နေတဲ့ System ကနေ ဘာလို့ ရွှေ့ပြောင်းအသုံးပြုလာကြတာလဲ ?
– Digital Transformation အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ Email ပို့တဲ့ Feature တစ်ခုထဲ မဟုတ်တော့ပဲ Communication Based Feature တွေ လိုအပ်လာတယ်။
– မြောက်များစွာသော Data တွေ၊ Information တွေကို သိမ်းနိုင်ရန် Unlimited (အကန့်အသတ်မရှိ) တဲ့ Cloud Storage Space တွေ လိုအပ်လာတယ်။
– Modern Workplace (အသုံးပြုသူ User) တွေ အတွက် လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကိုက်ညီပြီး အကျိုးပြုစေမယ့် Features တွေ လိုအပ်လာတယ်။
– မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ System ရဲ့ Security (လုံခြုံမှု) အားကောင်းဖို့တွေ လိုအပ်လာတယ်။
– IT admin တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ Organization ရဲ့ User တွေကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ Manage လုပ်နိုင်ဖို့တွေ လိုအပ်လာတယ်။
– Availability, Scalability and Reliability အတွက် စဉ်းစားလာကြတဲ့အတွက် ဒါတွေကို ရာနှုန်းပြည့် ပေးဆောင်နိုင်မဲ့ Solution လိုအပ်လာတယ်။
– Cost ကို Optimized လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်။
အစရှိတဲ့ လိုအပ်ချက် (Requirements) တွေကြောင့် O365/M365 Solution က မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်လာပါတယ်။
🔹💭 O365/M365 Solution ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲ ?
Email တစ်ခုထဲ သုံးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Communication Based Features တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ ဥပမာ- Chat Based Software အနေနဲ့ တခြား မလုံခြုံတဲ့ Social Application တွေအစား Microsoft Teams ကို အသုံးပြုလာနိုင်တယ်။ Microsoft Teams ကနေ Private Chat, Group Chat, Video Conferencing, File Sharing နဲ့ Application Integration တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Files တွေ သိမ်းဖို့ ယခင်ကလို File Server ကြီးတွေ ထားစရာ မလိုတော့ဘဲ OneDrive Feature ကို အသုံးပြုနိုင်လာတယ်။
File Sharing အတွက် SharePoint Server တွေထားစရာမလို Cloud Sharepoint Site Features တွေ အသုံးပြုကာ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုလာနိုင်တယ်။
Official Office Application ကို သီးသန့် လိုင်စင် ဝယ်စရာမလိုဘဲ Built-in ပါဝင်လာတယ်။ ဒါ့အပြင် Auto-Update Feature ပါ ပါဝင်လာပါတယ်။ တခြားသော Features များစွာလဲ ထပ်ပြီးပါဝင်ပါသေးတယ်။
Enterprise Mobility and Security Features တွေလဲ အများကြီး ပါဝင်တယ်။ Zero-day Attack တွေကို Protect လုပ်နိုင်အောင် Advanced Threat Protection (ATP) Feature, Document Data File တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် Azure Information Protection (AIP) Feature, Devices တွေကို Manage and Control ကောင်းစွာ လုပ်နိုင်ဖို့ Intune Feature, Identity Service တွေအတွက် Azure Active Directory Features အသရှိသဖြင့် Security Feature မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ (ATP, AIP, Intune, AAD အစရှိတဲ့ Security Features မျိုးစုံကို အရင် Article တွေမှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒါတွေအပြင် M365 မှာဆိုရင် Windows Enterprise License ပါ ပါဝင်တဲ့ အတွက် Windows License သီးသန့်ဝယ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Endpoint Security အတွက်လည်း သီးသန့် Vendor မလိုအပ်တော့ပါ။ Windows Enterprise E5 မှာ Windows Defender ATP Built-in ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ (အသေးစိတ်ကို Windows Defender ATP တွင် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။)
Cost အရကြည့်ရင်လဲ Cloud Based ဖြစ်လို့ Pay As You Go ပဲဖြစ်တယ်။ Device တွေ၊ Maintenance Cost တွေကို ကြိုတင် ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာ မလိုအပ်တော့ပါ။ မိမိတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီ တဲ့ Features တွေကိုလဲ ရွေးယူနိုင်တဲ့ အတွက် Cost Waste မဖြစ်တော့ပါဘူး။
🔹💭 ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတဲ့ Solution ကို မိမိတို့ Organization မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ ?
👍 ပထမဆုံး NEX4 အနေနဲ့ Customer ရဲ့ Organization’s Requirements တွေ၊ Concern တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ် လို Solution က အသင့်တော်ဆုံးလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
👍 ပြီးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး Solution Design အတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့၊ Deliver လုပ်နိုင်ဖို့၊ အမှားအယွင်းမရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ NEX4 မှ ကျွမ်းကျင်နည်းပညာရှင်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
👍 လိုအပ်တဲ့ Cost ကို Optimize ဖြစ်နိုင်သမျှ ဖြစ်အောင် NEX4 မှ Solution ပေးနိုင်ပါတယ်။
👍 အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Environment အသစ် System အသစ်မှာ အသုံးပြုသူ User တွေ အခက်အခဲမရှိ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် NEX4 မှ Administrator Training, Users Training တွေ ကို Guide Book နဲ့တကွ စနစ်တကျ ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NEX4 ရဲ့ Success Story တွေ အနေနဲ့…
🔵 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Bank ကြီးတွေ
🔵 Tour And Travel Company
🔵 Enterprise Company
🔵 Telecom Company
… အစရှိတဲ့ Organization ကြီးများစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Digital Transformation ခေတ်ထဲတွင် မိမိတို့ Organization ကို Rich-Features နဲ့ Secure Environment ဖြစ်အောင် Microsoft O365/M365 Solution များနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။